Agromart | Agricultural Marketplace Nepal लसुन खेती गर्ने तरिका – Agromart
Q 1. लसुन(Garlic)को प्रयोग कसरी गरिन्छ ?
Q 2. लसुनमा कुन-कुन पौष्टिक तत्वहरु पाईन्छ ?
Q 3. लसुनको औषधिय गुण के-के हुन ?
Q 4. लसुन खेतीको लागी कस्तो हावापानी चाहिन्छ ?
Q 5. लसुन वालीको लागि चाहनिे तापक्रम कति हो ?
Q 6. लसुन खेतीको लागि प्रकास अवधि कति चाहिन्छ ?
Q 7. लसुन खेतीको लागि के रोप्नुपर्छ ?
Q 8. लसुन खेतीको लागि कस्तो माटो चाहिन्छ ?
Q 9. लसुन खेतीको लागि आवश्यक पर्ने मल के कती हो ?
Q 10. लसुन खेतीको लागी के कती कसरी मल प्रयोग गर्नु पर्छ ?
Q 11. लसुन तराईमा कहिले रोप्नु पर्छ ?
Q 12. लसुन मध्य पहाडमा कहिले रोप्नु पर्छ ?
Q 13. लसुन उच्च पहाडमा कहिले देखि रोप्नु पर्छ ?
Q 14. लसुन कतीको दुरीमा रोप्नु पर्छ ?
Q 15. लसुन रोप्न के कती बीउ (केस्रा) चाहिन्छ ?
Q 16. लसुन खेतीमा सिंचाई कहिले गर्नु पर्छ ?
Q 17. लसुनमा गोडमेल कहिले गर्नु पर्छ ?
Q 18. लसुन कहिले खन्नु पर्छ ?
Q 19. लसुनको क्यूरिङ्ग कसरी गर्ने ?